सहयोगको अपील – Nepal Online Khabar
Mar212021 by Puja SharmaNo Comments
का’ट्न लागिएको सुँगुरलाई महिलाले बचाइन्, सुँगुरले ४ वर्षमा ८० लाख रुपैयाँ कमाइदियो ।
Posted in समाचार, सहयोगको अपील
काठमाडौं : एक महिलाले ४ वर्ष पहिले का’ट्नको लागि पालिएको एउटा सुँगुरको बच्चालाई बचाएकी थिइन् । मात्रै ४ हप्ताको सुँगुरको बच्चालाई क’साइखानामा का’ट्नको लागि हुर्काइँदै थियो ।महिलाले त्यही बेला त्यो पोथी बच्चा किनिन् । त्यो सुँगुरले अहिलेसम्म ५० लाख पाउण्ड (८० हजार रुपैयाँ) कमाइसकेको छ । यो सुँगुरले क्या’नभासमा पेन्टिङ बनाउँछ । पछिल्लो पटक यो सुँगुरले बनाएको एउटा पेन्टिङ २ हजार ३५० पाउण्ड (३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ)मा बि’क्री भएको छ । पिग्कासो नामको यो पोथी सुँगुरले बनाएको बेलायती राजकुमार ह्यारीको पेन्टिङ यति महंगोमा बिकेको हो । द सनको रिपोर्टअनुसार यो पेन्टिङ स्पेनका एक व्यक्तिले किनेका हुन् । पिग्कासोले अहिलेसम्म पेन्टिङ बनाएर ८० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै कमाइसकेको छ ।पिग्कासोले कमाएको पैसा अन्य जनावरको हेरचाहको लागि खर्च गरिन्छ । पिग्कासो ४ वर्षको छ । सपग्कासोले अहिलेसम्म सयौं पेन
म अरबमा छु श्रीमती अस्पतालमा छटपटाई रहेकी छिन् धेरै ब्लड चाहिन्छ रे क्रिपया सहयोग गरिदिनुहोस् ।
Posted in सहयोगको अपील
अहिले एउटा स्टाटसले सबैको मन रुवाएको छ । लाखौँको संख्यामा विदेशी भूमिमा रहेका अधिकांश नेपाली दाजुभाइहरुको भोगाई भएकै कारण सायद त्यो फेसबुकको स्टाटस भाइरल भइरहेको छ । एकजना विदेशीएका छोराले फेसबुकमा लेखेका छन् । यो के भयो बढी । तिमी हस्पिटलको बेडमा छटपटी हरेकी छौ । उता घरमा नानीहरुको बिचल्ली छ । म अर्काको देशमा रोड बढार्दै छु । तपाईहरु प्रति केही सहयोगको आशा राख्दैछु । मेरो फेसबुक लिस्टमा रहनु भएको सम्पुर्ण साथी भाइ र मेरो आफन्तहरुलाई म बिनम्र अनुरोध गर्दछु । मेरो बुढी हप्ता दिन देखि बिराटनगर नोवेल हस्पिटलको आइसीयूमा छटपटी हरेकी छिन । डाक्टरहरुको भनाई अनुसार एबी पोजेटिभ ब्लड धेरै मात्रामा लगाउनु पर्छ रे । यदी तपाई लगाएत तपाईका फ्याम्ली तपाईहरुले चिनेको साथीहरुसँग यो रगत समुह छ भने क्रिपया सोधी खोजी गरेर सहयोग गर्दिनुहोला । प्लिज प्लिज । यदी एबी पोजेटिभ ब्लड पूरा भयो भने मात्र ब
हस्पिटल बाटै बचाइदिन आग्रह गरिन डिनाले, उनी भन्छिन मलाई बचाउनुहोस्, म बाँच्न चाहान्छु…सक्दो सेयर गर्नुहोस् ।
काठमाडौ : मेरो नाम डिना परियार हो म २४ वर्षकी भए मेरो घर नेपालगञ्ज बाके खजुरा हो । मलाई ११ महिना देखि ब्लड क्या'न्सर भएको छ । म अहिले काठमाडौंको टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएकी छु । ११ महिना देखि जसोतसो ऋ'ण गरि औषधि उपचार भयो तर अब मेरो घर को अवस्था यस्तो छैन ।यसैले मेरो औषधि उपचारका लागि मलाई चिन्ने या नचिन्ने ठूलो मन हुनुहुने सम्पूर्णलाई दुई हात जोडि सहयोग को अपेक्षा राख्दछु । हजुरहरु को सानो सहयोग ले म बाच्न सक्छु भन्ने मलाई बिन्ति सहयोग गरिदिनु हुनेलाई भ'गवान खोज्न मन्दिर जानु पर्दैन भगवान त हाम्रो मनमा हुनुहुन्छ मलाई सहयोग गरिदिनु हुनेलाई मेरो खाता नम्बर तल राखेकेकी छु । क्रि'पया सहयोग गरिदिनुहोस् । Account number हो 1115750837223001 एनआईसी एशिया bank branch खजुरा, मेरो Account नाम : डिना परियार , मेरो फोन नं हो। 9816579174 , 9803962833 बिन्ति सहयोग गर्नुहोला।
Oct152020 by Nepal KhabarNo Comments
छोराको आन्द्रामा प्वाल परे पछि मेरो छोरालाइ बचाइदिनु भन्दै बुवाले अस्पताल बाटै मागे गुहार सक्दो सेयर गरिदिनु होला ।
नमस्ते🙏म चित्र आठपहरिया राई मेरो छोरि आयुशा राई आठपहरिया १३ बर्षकि सानो ठूलो आन्द्रा दुइटैमा प्वाल परेर अपरे'शन गरेको र अहिले रुममै ल्याएर आफैले ड्रेस्सिङ गर्दैछौ साइडको दि'शाको थैली हो,। अब दुई महिनामा त्यो आ'न्द्रालाई मल'द्वारमा जोड्न र थैलिको प्वाल टाल्न फेरि अर्को अपरेशन गर्नुपर्नेछ अहिले सम्म ४,५००००/ सकियो अब अरु ३,०००००/ जति लाग्ने अनुमान छ यो बि'पत्तिमा मेरो आर्थिक स्थिती क'मजोर । भएकोले सहयोगी मनकारी सबैलाई सहयोगको बिनम्र अ'नुरोध गर्दछु🙏 इच्छुक मनको धनिहरुले यो मेरो खातामा सहयोग जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ धन्यबाद्🙏 Chitra Kumar Rai , Mega Bank – Thamel Branch A/C no. 0570050071364 र IME गर्नुहुने सहयोगीले Chitra Kumar Rai, Lalitpur Nepal. Mobile no. 9843202443
Oct142020 by Nepal KhabarNo Comments
दुनियाकै मनमा बसेका डाक्टर-नर्सकी छोरी सियोनालाई ग’म्भीर समस्या : उपचारमा २५ करोड लाग्ने…सक्दो सेयर गर्नुहोस् ।
काठमाडौ : मानिस जन्मिदै कस्तो भाग्य लिएर आउँछ त्यो कसैलाई थाहा छैन । नानी सियोन श्रेष्ठ अहिले मात्र १३ महिनाकी भइन् । उनकी आमा एलिना गुरुङ् पेसाले नर्स हुन । बाबु डा. सन्दिप श्रेष्ठ आफैमा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ हुन् । उनले विशेषज्ञताले हज्जारौ नानी बाबुहरुको जीवन रक्षा भएको छ । उनी छोटो समयमा नै हरेक नेपालीको मनमा बस्न सफल चिकित्सकमा पर्छन् । तर भाग्यको खेल उनकै छोरी सियोना श्रेष्ठमा जन्मजात वंशानुगत लाग्ने रोग SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SME-1) लाग्यो । यो रोग भएपछि बच्चाका अंगहरुले काम नगर्ने, विस्तारै सबै सुक्दै जाने र मृत्यु हुने जस्ता लक्षण देखिन्छ । यो अत्यन्तै खर्चिलो रोग हो । यसको उपचारका लागि करिब २५ करोड रुपैया लाग्दछ । यसको उपचार अमेरिका लगायत उच्च विकसित देशका ठूला अस्पतालमा मात्र सम्भव छ । यस बिरामीको उपचार २ वर्ष भित्र गरिसक्नु पर्ने र १ वर्ष भएपछी शुरू गरिसक्नुपर्ने हुन्छ